Ilifa abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-Japan kuba Wonke Isixeko
Nagahama, Mizuno Inoue ifumaneka Tokyo, Ejapan kwaye inika iinkonzo non-Isijapanese abantu kwaye amakhulu ngokunjalo Isijapanese abantu kwaye amakhulu. Senzo kwiindawo ziquka corporate umthetho, mergers kwaye acquisitions, nephepha kwaye i-arhente zamazwe ngamazwe. Umthetho Ifemi ke Isixhosa sisebenzisa a boutique uhlobo umthetho ifemi lwesiqulatho apho kugxilwa kwi corporate kwaye real estate imiba. Uzakufumana kuthi eluncedo xa ufuna zibandakanya kwishishini lakho kwi-Japan, irejista i-sebe, kwaye bagcine inkampani elungileyo ukuze ukuthobela Iinkampani Act ka-Japan. Sikwangawo ingcaphephe ka-real estate ubhaliso.
Ukwakha ukusuka yayo kweelwimi-ifumana imali kwaye securitization iindlela ezilungileyo, Atsumi Sakai siqulunqe ubunzulu iinkalo zobuchule ukuba ivakalisa kuwo yonke imihlaba ishishini kwaye iimali umthetho. Ifemi sele lunxulumano ukugqwesha kuba yayo innovative izakhono kwi-ezemali, ingakumbi kuba umsebenzi wethu kule projekthi. Satsuki Umthetho Ifemi sele kuphethwe iimeko kuba non-Isijapanese abaxhasi kuba ngaphezu amabini eminyaka. Ingakumbi thina ingaba uqinisekile kwi-ngamazwe wokuqhawula umtshato, umntwana custody, umntwana abduction, immigration amatyala. Sathi kanjalo ukukhombisa u-mthetho iimeko, traffic kunokwenzeka ingozi compensations, kwaye abasebenzi kunokwenzeka ingozi imbuyekezo, kuba. Ushishino Iinkonzo. Uxwebhu kwaye Uguqulelo Iinkonzo — Sino amava ukuba umthetho wezolunyulo ubalelisela *** uxwebhu ukuba kufuneka ezenziwe sesi sibini kunye ezahlukeneyo irhafu, ubhaliso, nezinye governmental ii-ofisi — Thina uphephe isemva ixesha apho unako akhaphe bilingual unxibelelwano nge-ukuguqulela. Sisebenzisa ebekwe kwi-Yokohama, Ejapan. Thina ukukhombisa u-a libanzi indawo isemthethweni imicimbi, ingakumbi ‘ishishini imithetho’ ezifana corporate imithetho, ngamazwe urhwebo, intellectual iimpahla kuquka patents, iimpawu zokurhweba, kwaye copyrights, enxulumene imithetho entertainment imithetho, antitrust imithetho, njalo njalo.
TMI Associates yamiselwa ngowe- kunye kuqhutywe amane anesithoba amalungu. Ukususela zethu foundation, bethu umsebenzi wenziwe ukuba ‘Ukwamkela Entsha Imingeni’ kwaye ‘Ekusebenzeleni Abaxhasi’ Ifuna, apho ngoku bahlala efanayo, nangona eziquqa ukukhula zethu ifemi
Yintoni ibango imali